China High Quality PVC mkpuchi Steel waya factory na soplaya |XINTELI
Igwe mkpuchi mkpuchi PVC dị elu
Ihe: Carton Steel dị ala ma ọ bụ carbon dị elu
Isi: waya ojii, eletriki galvanized ma ọ bụ ọkụ galvanized waya.
Agba: Ọchịchịrị / ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọchịchịrị / ìhè acha anụnụ anụnụ, ọcha, nwa, odo, wdg.
PVC wayana-arụpụtara na àgwà ígwè waya dị ka ihe onwunwe, ọ nwere ike mere n'ime dị iche iche waya ngwaahịa, otú dị ka abụọ akaghị waya agbatị, rebar tie waya, bee waya, barbed waya, PVC ntekwasa yinye njikọ nsu, PVC ntekwasa ígwè waya ntupu.Etc
Agba ụgbọ / ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọchịchịrị/acha anụnụ anụnụ, ọcha, nwa, odo, wdg.
Nkwupụta: Enwere ike ịme nha ọzọ karịa nke a kpọtụrụ aha n'elu ma ọ tụlechara ya.
Dayameta dị iche iche nke waya ga-eme ka ọ bụrụ eriri dị n'ime dị iche iche.
Atụmatụ : Ọ nwere mgbochi ịka nká onwunwe na ogologo ọrụ ndụ tụnyere nkịtị galvanized wires.Ọ dị ọnụ ala na ọnụ ahịa, mara mma na nke siri ike, nke na-adịghị eyi uwe, na-eguzogide ọgwụ, ma nwee ezigbo ihe mkpuchi.
Ngwa: Ihe kachasị ewu ewu maka waya mkpuchi PVC bụ n'ịrụ ụlọ njikọ njikọ njikọ maka ogige nchekwa ụlọ ọrụ, okporo ụzọ free na ụlọ tenis.A na-ejikwa ya na ngwa ndị ọzọ dị ka uwe mkpuchi na aka.
Mbukota: ọbọp na plastic film n'ime, hessian ákwà ma ọ bụ kpara akpa n'èzí Ịkwụ Ụgwọ Ụzọ: T / T, Ọganihu TT, Paypal Etc.
Nke gara aga: waya galvanized
Osote: Razor Barbed Waya
1.6mm PVC mkpuchi Iron waya
Pvc mkpuchi Iron waya
PVC ígwè waya
Anụ ọhịa Galvanized na-egbochi ibe nkwonkwo ụkwụ W...
Omenala emere galvanized hexagonal waya netting C...
Ntupu gabion&hexagonal ntupu gabion agbadoro
Igwe eji eriri igwe hexagonal
Ụlọ ọrụ na-ebunye ugbo ngere mgbụsị akwụkwọ Hinge Joi...